အဲဒီမှာသန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေဟာအိုမင်းရင့်ရော်မှုတိုက်ဖျက်ရေးပစ္စည်းတွေအတွက်ငွေအများကြီးသုံးကြတယ် Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်။ အိုမင်းခြင်းသည်သဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းလူတို့သည်အိုမင်းခြင်းကိုမကြည့်လိုကြပါ။ သတင်းကောင်းမှာ၎င်းတွင်အမှန်တကယ်အထောက်အကူပြုနိုင်သည့်ထုတ်ကုန်များစွာရှိပြီးနီကိုတင်းနိုက်ရိဘိုဆိုဒီကလိုရိုက်သည်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီ post မှာတော့ကျနော်တို့ထုတ်ကုန်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်ကို၎င်းအကြောင်း၊ ၎င်းမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ ၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ၊ ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲနှင့်၎င်းကိုသင်ပိုမိုအသုံးချနိုင်ရန်ကူညီရန်နောက်ထပ်အကြံပြုချက်များကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပေးမည်။
Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်ကဘာလဲ။
ဒီတော့အခြေခံအကျဆုံးမေးခွန်းကနေစကြရအောင်။ ရှုပ်ထွေးသောနာမည်ကြီးကိုမမေ့ပါနှင့်။ Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက် CAS 23111-00-4 တကယ်တော့ Niacin အဖြစ်မကြာခဏရည်ညွှန်း Vitamin B3 ၏အခြားရွေးချယ်စရာပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်ကိုလည်း niagen (သို့) NR အဖြစ်အတိုကောက်ခေါ်နိုင်သည်။ ၎င်းခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်သည်နှင့်ပြောင်းလဲသွားသည် Nicotinamide adenine dinucleotide ဖြစ်သည် သို့မဟုတ် NAD + ။ NAD + သည်လူ့ဇီဝကမ္မဗေဒတွင်အရေးကြီးဆုံးအင်ဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အစားအစာများကိုစွမ်းအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဆဲလ်တစ်ခုစီတွင်တွေ့ရသောကာကွယ်ရေးစနစ်များအပါအဝင်အဓိကဇီဝဖြစ်စဉ်များကိုလောင်စာဖြစ်စေသည်။ အင်ဇိုင်းသည်ပျက်စီးနေသောဒီအင်အေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရာတွင်အလွန်အရေးပါပြီးကျန်းမာသောအိုမင်းခြင်းကိုတိုးမြှင့်ရာတွင်အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်သည်အပိုဖြည့်စွက်ခြင်းမရှိဘဲကိုယ်ပိုင် NAD + အင်ဇိုင်းကိုအလွယ်တကူထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ဝမ်းနည်းစရာမှာ၊ သင်အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှခန္ဓာကိုယ်မှထုတ်လုပ်သော NAD + ပမာဏလျော့ကျသွားသည်။
အများအားဖြင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများသည်ဤအရေးကြီးသောအင်ဇိုင်းများ၏အငယ်စားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုမိုနိမ့်ကျသည်။ ဖြည့်စွက်အလွန်အရေးကြီးသောဖြစ်လာနေရာအရပ်ဖြစ်၏။ အထူးသဖြင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများကြားတွင် NAD + အဆင့်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်နီကိုတင်းနိုက်ဒီဘီရိုဘိုက်ထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်းသည်မယုံကြည်နိုင်လောက်သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့် NAD + ၏ကျဆင်းနေသောအဆင့်များကိုဆီးချိုရောဂါ၊ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါနှင့်အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးမှုအပါအဝင်အသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောနာတာရှည်ရောဂါနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ NAD + မြင့်တက်ခြင်းသည်အိုမင်းခြင်းလက္ခဏာကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်စေနိုင်သည့်သက်သေအထောက်အထားအချို့လည်းရှိသည်။ နောက်ဆုံးတွင်နီကိုတင်းနိုက်ဒီရီဘိုဆိုဒ်ကလိုရိုက်ဖြည့်စွက်ဆေးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်ငယ်ရွယ်။ ယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်ဖြင့်ကူညီပေးသည်။ ၎င်းသည်အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှနာတာရှည်ရောဂါများဖြစ်နိုင်ချေကိုလည်းလျှော့ချပေးနိုင်သည်။
Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
Nicotinamide Riboside chloride နှင့် niacin ဖြည့်စွက်ခြင်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ NAD + အဆင့်များကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ NR သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန်အစားအစာတွင်သေးငယ်သောသဲလွန်စများ၌တွေ့ရသောဗီတာမင်ဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းကိုအူထဲသို့သွင်းလိုက်သည်နှင့်၎င်းကိုပုံမှန်ဇီဝဖြစ်စဉ်ဖြစ်စဉ်များမှတဆင့် NAD + သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ NR + အဆင့်များကိုတိုးမြှင့်လိုသောသူများအတွက် NR ကိုရွေးချယ်စရာတစ်ခုက၎င်းသည်အလွန်ဇီဝရရှိနိုင်သည့်အချက်ဖြစ်သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း NR သည်ဗီတာမင် B3 ပုံစံဖြစ်သည်။ ဗီတာမင် B3 ကိုသယ်ဆောင်နိုင်သောအစားအစာရင်းမြစ်များစွာရှိသည်။ သို့သော်၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိနီကိုတင်းနိုက်ရိဘိုဆိုဒ်ကလိုရိုက်စုပ်ယူမှုနှုန်းသည်အစားအစာရှိအခြား B3 ပုံစံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြန်ဆန်သည်။ ၎င်းသည်လူ့ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိ NAD + အတွက်စိတ်ချရဆုံးနှင့်ထိရောက်သောဖြည့်စွက်နည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်အကျိုးကျေးဇူးများ
Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ NAD + ၏အခန်းကဏ္ in နှင့်သာတွေ့မြင်နိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် NR ဖြည့်စွက်ခြင်းသည် NAD + အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီးအပြန်အလှန်အားဖြင့်ဤအရေးကြီးသော coenzyme သည်အောက်ပါအချက်များကိုဖော်ပြလိမ့်မည် Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်အကျိုးကျေးဇူးများ:
ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ NAD + ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်လာခြင်းသည်ကျန်းမာသန်စွမ်း။ သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုပိုမိုအားကောင်းစေမည့်အင်ဇိုင်းအချို့ထုတ်လုပ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများတွင် coenzyme သည် sirtuins ဟုခေါ်သောအင်ဇိုင်းတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
Sirtuins သည်လက်တွေ့လေ့လာမှုများပြုလုပ်ချိန်တွင်သက်တမ်းနှင့်တိရိစ္ဆာန်စမ်းသပ်မှုများ၏ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေခဲ့သည်။ အခြားလေ့လာမှုများအရ Sirtuins သည်လူတို့၏စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်ရန်နှင့်ပျက်စီးနေသော DNA ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ကူညီနိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်
2. ဦး နှောက်ထဲမှာဆဲလ်ကာကွယ်ရေးယန္တရားတိုးတက်စေ
NAD + သည်အထူးသဖြင့်အိုမင်းခြင်းနှင့်အတူ ဦး နှောက်ဆဲလ်များကိုမမှန်သည့်ယိုယွင်းခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ လေ့လာမှုအချို့အရ NAD + သည် PGC-1-alpha ဟုခေါ်သောပရိုတင်းထုတ်လုပ်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ပရိုတိန်းသည်ဆဲလ်များကိုဓါတ်တိုးစေနိုင်သောဖိစီးမှုမှကာကွယ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်ဆဲလ်များ၏ mitochondrial လုပ်ဆောင်မှုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးပြန်လည်ကောင်းမွန်စေပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောသိမြင်မှုကျန်းမာရေးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဦး နှောက်ဆဲလ်များတွင်အောက်စီဂျင်ဓာတ်တိုးစေသောစိတ်ဖိစီးမှုနှင့် mitochondrial လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဆက်စပ်မှုရှိသောသုတေသနလေ့လာမှုများစွာသည်အသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ရောဂါများဖြစ်သောအယ်လ်ဇိုင်းမား၊ ပါကင်ဆန်နှင့်အခြားသူများဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်များကိုလျှော့ချရာတွင် NAD + ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်အန္တရာယ်ကိုသိသိသာသာလျော့ချနိုင်သည် အယ်လ်ဇိုင်းမား နှင့်အခြားဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာ ဦး နှောက်ရောဂါများ။
ဤအချက်၌ NAD + ၏ထိရောက်မှုသည်အလွန်မြင့်မားသည်။ တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများတွင်အယ်ဇိုင်းမားနှင့်ကြွက်များကိုနီကိုတင်းနိုက်ဒီဘိုက်ဒ်ကလိုရိုက်နှင့်ကုသသော ဦး နှောက်အတွင်းရှိ PGC-1-alpha ပမာဏသည် ၅၀ မှ ၇၀% အထိတိုးတက်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုအပြီးတွင် NR နှင့်ကုသသောကြွက်များသည်မှတ်ဥာဏ်အခြေခံလုပ်ငန်းများအတွက်သိသိသာသာတိုးတက်မှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။
3. Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်သည်နှလုံးပြProbleနာများအတွက်အကူအညီဖြစ်စေနိုင်သည်
နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုအိုမင်းခြင်းဖြင့်သိသိသာသာတိုးပွားစေသည်။ နှလုံးရောဂါသည်အလွန်အဖြစ်များသည့်ပြisနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကမ္ဘာအနှံ့သေဆုံးမှု၏နံပါတ်တစ်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ယေဘုယျနှလုံးကျန်းမာရေးသည်သင့်တော်သောအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများပါရှိသော်လည်းအချက်များစွာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သို့သော်အန္တရာယ်လျှော့ချနိုင်သောအရာအချို့ရှိပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းသည်ဤအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
တိရိစ္ဆာန်များအားစမ်းသပ်မှုများအရ NAD + ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ခြင်းသည်အိုမင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောသွေးလွှတ်ကြောများတွင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်စေသည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။ အချို့သောလူ့အခြေပြုလေ့လာမှုများအရ NAD + အဆင့်မြင့်ခြင်းသည် aorta တွင်တောင့်တင်းမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ NAD + သည်နှလုံးကျုံ့သွေးဖိအားဖြစ်နိုင်ချေကိုလည်းလျှော့ချပေးသည်။
ဤအကျိုးခံစားခွင့်များအပြင် Nicotinamide Riboside chloride သည်လည်းကူညီနိုင်သည် အလေးချိန်အရှုံး။ အကြောင်းမှာ NAD + သည်မြင့်မားသောကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှုန်းကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ NAD + အဆင့်မြင့်ခြင်းသည်ကင်ဆာနှင့်ဆက်နွှယ်နေသောအချက်နှစ်ချက်ဖြစ်သော DNA ပျက်စီးခြင်းနှင့် oxidative stress များကိုတားဆီးသည်။ coenzyme သည်ကြွက်သားသန်စွမ်းခြင်းကိုလည်းကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။
Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်အသုံးပြုနည်း
Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်ကို niagen အဖြစ်ရောင်းချသည်။ ထုတ်ကုန်ကိုအွန်လိုင်းဆေးတောင့်ဖြင့်ရောင်းချပြီးပါးစပ်ဖြင့်စားသုံးသည်။
niagen ထုတ်ကုန်အများစုတွင်နီကိုတင်မိုင်ရိဘိုစိုက်ဒီကလိုရိုက်ပါဝင်မှုရှိသော်လည်းအချို့တွင်ပိုလီဖီနိုရောသို့မဟုတ်ပိုတာစလင်းဘင်အပါအဝင်နောက်ထပ်ပါဝင်ပစ္စည်းများပါရှိသည်။ ထုတ်လုပ်သူများကတစ်နေ့လျှင် ၂၅၀ မီလီဂရမ်မှ ၃၀၀ မီလီဂရမ်အကြားရှိနီကိုတင်းနိုက်ရိဘိုဆိုဒ်ကလိုရိုက်ဆေးသောက်ရန်အကြံပြုသည်။ ဒါဟာအကြမ်းအားဖြင့်ထုတ်ကုန်နှစ်ခုရဲ့ဆေးတောင့်တွေနဲ့အတူတူပါပဲ။
Nicotinamide Riboside (NR) နှင့် Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက် vs.
ဤအရာဝတ္ထုနှစ်ခုအကြားတစ်ခုတည်းသောကွာခြားချက်မှာဖော်မြူလာဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့တွင်အလားတူအလုပ်လုပ်သောယန္တရားရှိသည်။ Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်နှင့် Nicotinamide Riboside နှစ်ခုလုံးသည်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိ NAD + ထုတ်လုပ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့သည် Vitamin B3 ၏အခြားရွေးချယ်စရာပုံစံများဖြစ်သည်။
Nicotinamide Mononucleotide (NMN) နှင့် Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်)
Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက် vs ဆွေးနွေးငြင်းခုံ NMN အဲဒါမကြီးမားဘူး Nicotinamide Mononucleotide (NMN), Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်ကဲ့သို့ပင် niacin မှဆင်းသက်လာသည်။ ဒီအရာ ၀ တ္ထုနှစ်ခုဟာသူတို့အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့လည်းဆင်တူတယ်။ သူတို့သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်သောအခါသူတို့သည် NAD + သို့ ၀ င်ရောက်လာပြီးပြောင်းလဲသွားသည်။ ထို့အပြင်ဤအရာဝတ္ထုနှစ်ခုလုံးကိုလည်း ribose နှင့် Nicotinamide ပေါင်းစပ်မှုမှဖန်တီးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အစားအစာအများစုတွင်နီကိုတင်းမင်ရီဘီဆိုဒ်အနည်းငယ်သာပါဝင်သည်။ သို့သော်လူအများစုအတွက်ပျှမ်းမျှအစားအစာတွင်ဗီတာမင် B3 ပါ ၀ င်သည့်အစားအစာသည်နီကိုတင်းနိုက်ရိဘိုစိုင်ဒီဒကိုလိုအပ်သောစားသုံးရန်လုံလောက်သည်။
နို့နှင့်နို့- နွားနို့တွင် Nicotinamide Riboside များစွာပါရှိသည်။
ငါး- သင် NR ကိုငါးမှလည်းရနိုင်သည်။ တူနာ၊ ပါဒင်းနှင့်ဆော်လမွန်အားလုံးသည်နီကိုတင်မိုင်ဒီဘီရိုဘိုက်အဆင့်မြင့်သည်။
ဘီယာ- အံ့သြစရာကောင်းတာကဘီယာက Nicotinamide Riboside ကိုဖြည့်စွက်ရန်လည်းကူညီလိမ့်မည်။ အကြောင်းမှာဘီယာတွင်တဆေးသည်အဓိကပါဝင်သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတဆေးသည် NR တွင်အလွန်မြင့်မားသည်ကိုသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကြက်သား- ကြက်သားစားခြင်းသည်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာတွင်လည်း NR အဆင့်ကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်။ ကြက်သားကင်ခြင်း၊ ကင်ခြင်း၊ ကြော်ခြင်း (သို့) စွပ်ပြုတ်များတွင်နီကိုတီနိုက်ရိဘီဘိုက် (၉.၁) မီလီဂရမ်အထိပါဝင်သည်။
အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ- အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုလည်းအကြံပြုသင့်သည်။ ၄ င်းတို့တွင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ NAD + ပေါင်းစပ်ရာတွင်အရေးပါသောအရေးကြီးသည့် B3 အပါအဝင်ဗီတာမင်များများပါ ၀ င်သည်။
ကဇေါ်မြှုပ် - နောက်ဆုံးအနေနဲ့မင်းက Nicotinamide Riboside ကိုဘီယာကနေလုံလောက်စွာမရရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်သင်ကတဆေးကိုသီးခြားစီစားချင်လိမ့်မယ်။ Nicotinamide Riboside တွင်တဆေးသည်အလွန်မြင့်မားပြီးသင်၏အစားအစာတွင်ထည့်သွင်းသင့်သည်။
Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်သည်လုံခြုံပါသလား။
Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်သည်အသုံးပြုရန်အလွန်စိတ်ချရသောဖြည့်စွက်ချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်မည်သည့်ထုတ်ကုန်မဆိုကဲ့သို့၎င်းသည်သင်သတိပြုသင့်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများစွာရှိသည်။ အချို့သောလူ့လေ့လာမှုများတွင်စမ်းသပ်မှုဘာသာရပ်များအားမီလီဂရမ် ၁၀၀၀ မှ ၂ ဝဝမီလီဂရမ်နှင့်နီကိုတီနိုက်ရိုင်ဘိုဇိုက်ကလိုရိုက်တို့မှပေးခဲ့သည်။ ယခုအချိန်အထိ Nicotinamide Riboside Chloride ထုတ်လုပ်သူများသည်တစ်နေ့လျှင်ထုတ်ကုန်၏ 1000 mgs and 2000 mgs အကြားအကြံပြုပါသည်။
ဒီလုံခြုံမှုမှတ်တမ်းရှိပေမဲ့နီကိုတင်းနိုက်ရိဘိုစိုက်ဒီကလိုရိုက်သည်သတိရဖို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ပထမ ဦး စွာအချို့လူများကထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုပြီးနောက်အသည်းအသန်ခံစားမိကြောင်းအစီရင်ခံတင်ပြကြသည်။ အခြားဖြစ်ရပ်များတွင်လူနာများသည် Nicotinamide Riboside Chloride ကြောင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီးခေါင်းကိုက်ဝေဒနာခံစားရသည်။ အစာအိမ်အဆင်မပြေခြင်းနှင့် ၀ မ်းလျှောခြင်းကဲ့သို့သောအစာခြေခြင်းပြexperienceနာများကိုလည်းတွေ့ရလေ့ရှိသည်။
သို့သော်၊ နီကိုတင်းနိုက်ရိုက်ဘိုက် (Riboside chloride) ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏ပြင်းထန်မှုသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားသည်။ အချို့သောလူများသည်ဤသက်ရောက်မှုများကိုတောင်မှလုံးဝမခံစားရပါ။ သင်သည်အခြားဆေးဝါးများသောက်နေပါက Nicotinamide Riboside Chloride ကိုမသုံးမီသင့်ဆရာဝန်နှင့်အရင်ပြောပါ။
သင် Nicotinamide Riboside Chloride သည်သင်၏ကျန်းမာရေးတစ်ခုလုံးကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကောင်းကျိုးများပေးနိုင်သည်ဟုသင်ထင်လျှင်၎င်းသည်ကုန်ပစ္စည်းများစွာကိုစတိုးဆိုင်များစွာတွင်ရရှိနိုင်ကြောင်းသင်သိရ။ သင်ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည်။ သင်တို့သည်လည်းအွန်လိုင်းသို့မဟုတ်အော့ဖ်လိုင်းဝယ်နိုင်ပါတယ်။ Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်ကို niacin အဖြစ်အများဆုံးရောင်းချသည်။ ဒါဟာအစတောင့ထဲမှာလာပါတယ်။
သို့သော်၊ သင်သည်ဝယ်သူတစ် ဦး ကိုရှာဖွေသောအခါသင်၏အချိန်ကိုယူလိုပေမည်။ သင့်အားအရည်အသွေးမြင့်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကမ်းလှမ်းမည့်ရောင်းချသူများစွာရှိသော်လည်းသင့်အားလိမ်လည်လှည့်ဖြားလိုသည့်ဆိုက်အတုများစွာရှိနေသေးသည်။
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းထွက်စစ်ဆေးပါ။ သင်မ ၀ ယ်မီရောင်းချသူနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားဖောက်သည်များဘာပြောနေမှန်းသိရန်အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအကြံဥာဏ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဖြစ်ကောင်းစွာစျေးနှုန်းများထွက်စစ်ဆေးပါ။ သော်လည်း Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်ကိုဝယ် သိပ်စျေးမကြီးဘူး၊ ဈေးလည်းမကြီးဘူး ကုန်ပစ္စည်းကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချသောရောင်းချသူများကိုရှောင်ရှားသင့်သည်။
တိုက်ရိုက်အကြံဥာဏ်တောင်းခံခြင်းသည်ကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းတွင်ခုန်ဆင်းခြင်းနှင့် Nicotinamide Riboside Chloride ဖြည့်စွက်များကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားမည့်အစား၊ ဤထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ခဲ့သူတစ် ဦး ဦး နှင့်ပြောဆိုပြီးသင့်ကိုအမှန်တကယ်ရောင်းချသူနှင့်သင်ဆက်သွယ်နိုင်မနိုင်စမ်းကြည့်ပါ။ ဆရာဝန်များသည်လည်း Nicotinamide Riboside chloride vs နောက်ထပ်မည်သည့်နေရာကိုစတင်ရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်အချို့ရှိနိုင်သည် နတေစျဆငျ့.
Nicotinamide Riboside Chloride သည်လူကြိုက်များသော anti-aging ဖြည့်စွက်ဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အိုမင်းခြင်းလက္ခဏာများကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်စေပြီးသင့်အားကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေသည်။ အထက်ပါလမ်းညွှန်သည်သင့်အားစစ်မှန်သောထုတ်ကုန်တစ်ခုရှာဖွေရန်ကူညီသင့်သည်။
3.Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်အကျိုးကျေးဇူးများ
4. Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ
၅။ နီကိုတင်းနိုက်ဒီရိုဘီဆိုဒ်ကလိုရိုက်နှင့်နီကိုတီနိုက်ရောဘိုဆိုဒ် (NR)
၆။ နီကိုတင်းနိုက်ဒီရိုဘိုက်ဆိုက်ကလိုရိုက်နှင့်နီကိုတင်းနိုက်မိုနွန်နူကလိုတိုက် (NMN）)
၇။ ဘာအစားအစာများတွင်နီကိုတင်းမင်ဒီရိုဘီဆိုဒ်ပါ ၀ င်သနည်း။
9.Nicotinamide Riboside ကလိုရိုက်အွန်လိုင်းကိုဝယ်ပါ